दुईबर्षको पढाई सकियो, बिद्यार्थीको छात्रबृत्ति बिचबाटोमै हरायो ? प्रधानध्यापकहरु एक अर्को भन्दै पन्छिए ! | Malika Khabar
दुईबर्षको पढाई सकियो, बिद्यार्थीको छात्रबृत्ति बिचबाटोमै हरायो ? प्रधानध्यापकहरु एक अर्को भन्दै पन्छिए !
३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १३:५५ मा प्रकाशित
लोकेन्द्र बिश्वकर्मा जाजरकोट । सरकारले गरिब,दलित र बिपनन् बिद्याथीहरुलाई भनेर बर्षेनी छात्रबृत्ति बितरण गर्दे आएको छ । तर जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा अबस्थित सिता माध्यामिक बिद्यालयले २०७५ साल देखीको छात्रबृत्ति बितरण गरेको छैन । यता दुईबर्षको पढाई सकियो तर बिद्यार्थीहरुले अहिले सम्म छात्रबृत्ति पाएका छैनन् ।
गरिब,दलित र बिपन्नहरुलाई बिद्यालयबाट दिईने छात्रबृत्ति सरकारले सिदै बैंक खातामा राख्ने ब्यबस्था गर्‍यो ? बिडम्बना सीता मा.बिको ६३ हजार रुपैया पुर्ब प्रधानध्यापक र बिद्यालय ब्यबस्थापन समितीका अध्यक्षको निजी खातामा पर्न गयो । बिद्यार्थीहरुले छात्रबृत्ति नपाएको र बिद्यालयको खाताको रहेको रकम हिनामिना भएको बषौ बित्यो । कुनैपनी निकायहरुले ध्यान नदिएको विद्यार्थीहरुको गुनासो रहेको छ ।
यता दुईवटै प्रधानध्यापकहरु पनी एकअर्का भन्दै पन्छी रहेका छन । पुर्ब प्रधानध्यापक भुमिलाल शाहीले बिद्यालय ब्यबस्थापन समिती,अविभाव संघ सबैलाई बैठक गराएर हिसाब किताब गरेर सवै बुझाए र गएको अझै । बिद्यालयको हिसाबमा उल्लेख गरेको बिद्यालय छानो बिद्यालयको टिन फेर्दा १ लाख ३६ हजार आफुले दिएको उक्त रकम लिनु भएको बताउँछन ।
अर्का पक्ष हालका प्रधानध्यापक तिलकबहादुर खत्री भने आफु २०७६ सालको भन्दा पछाडिको जवाफदेहीता हुन्छु । ७५ सालको थाहा नभएको भन्दै पन्छीरहेका छन । एकअर्कामा दोष देखाउँदै पन्छीरहेका दुबै प्रधानध्यापक र बिद्यालय ब्यबस्थापन समितीहरुको यो बिषयहरुमा चर्का लाप्रवाही रहेकोछ ।
” विद्यार्थीहरुले छात्रवृत्ति नपाएको बर्षौ बर्ष बित्यो जिल्ला शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ जाजरकोट प्रमुख अमृता अधिकारीले लकडाउन पछि छलफल गर्न धारण राख्छिन । बिश्वभरी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाको कहरले छाएको ५/६ महिना बित्यो तर छात्रवृत्ति नपाएको बर्षौ बर्ष बित्यो ।
बारेकोटको सिता माध्यामिक बिद्यालय त नमुना मात्र हो । जाजकोट जिल्लाका अधिकांश बिद्यालयहरुले यस्तो कार्य गदै आएका छन । यता शिक्षा बिकास स्थानिय सरकार स्थानिय प्रशासन भने बेखबरी अबस्थामा रहेका छन । कयौ बिद्यार्थीहरुको छात्रबृत्ति पाउँने सपना आशामा मात्र हुन्छ । लकडाउनको बेलामा घरमा बसी कापि कलम किनन् समेत संकट पर्नेबेलामा बिद्यालयले बषौ बर्षको छात्रबृत्ति नदिएको बिद्यार्थीहरुको गुनासो रहेको छ ।
खरमुक्त आयोजना अलपत्र, टिनको बाटो कुर्दा कुर्दा भत्कीए घर !
बारेकोट गाउँपालिकाको ११औ गाउँसभा सम्पन्न !